Go Big with a Triggered Email Strategy to Drive Sky-High ROI | .Na-agagharị Martech Zone
Gaa Nnukwu na Atụmatụ Ime Mmụọ Na-akpali Sky-High ROI
Wednesday, July 29, 2015 Wednesday, July 29, 2015 Fayez Mohamood
Ozi ịntanetị ndị akpalitere bụ ụzọ dị mma iji mee ndị ahịa ma kpụga ahịa, mana echiche na-ezighi ezi banyere ihe mejupụtara ya na otu esi etinye ha n'ọrụ na-egbochi ụfọdụ ndị na-ere ahịa iji ụzọ aghụghọ eme ihe n'ụzọ zuru oke.
Kedu ihe bụ Email na-akpali akpali?
Na ọkwa ya kachasị dị egwu, ihe na-akpalite bụ nzaghachi akpaaka, dịka ekele ekele ụbọchị ọmụmụ sitere na Google. Nke a na - eduga ụfọdụ ikwere na enwere ike iji ozi ịntanetị kpatara naanị na ọnọdụ ndị pere mpe. Mana n'eziokwu, ndepụta nke ihe ndị na-akpali akpali, data na omume fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe.
Kama ịdaba n'ọnyà nke iche obere ma a bịa n'ihe ndị na-akpalite, ndị na-ere ahịa kwesịrị iche echiche banyere ihe ndị na-akpalite dị ka ihe nwere ike ịbụ ebumnuche ọ bụla iji weghachite ma jigide onye ahịa. Na ụlọ ọrụ ndị na-eji ugbu a ozi ịntanetị na-akpali akpali, mmekọrịta ịzụ ahịa ịzụ ahịa bụ ihe na-akpalite. Onye na-azụ ahịa nwere ike itinye ọtụtụ ihe n'ụgbọ ya wee hapụ saịtị ahụ. Companylọ ọrụ ahụ na-eji data ahụ eme ihe dị ka ihe na-akpali akpali, na-ezigara onye ahịa ihe ncheta email banyere ihe ndị dị na ụgbọ ahụ iji gbasaa ahụmịhe ịzụ ahịa na n'ikpeazụ mee ka ntụgharị gbanwee.
Ihe na-akpali akpali metụtara ịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụ bụ ụzọ a nwapụtara iji wee nweta ego site n’ichetaghachi ndị ahịa. Ma na itinye uche niile taa na mkpọsa nchịkọta na data ndị ahịa dị ka ihe ndị bụ isi na-eme ka a gbanwee mgbanwe, ọ nwere ike ịdị mfe maka ndị na-ere ahịa ka ha ghara ileghara isi iyi data ndị ọzọ bara uru n'ime nzukọ ahụ anya, dị ka katalọgụ ngwaahịa na mgbanwe ọnụahịa.
Mgbe ndị na-ere ahịa na-akọwapụta ihe na-akpali akpali dị ka ohere iji soro ndị ahịa na-emekọrịta ihe dabere na omume ndị ahịa na mgbanwe na katalọgụ ngwaahịa ahụ, ha nwere ike ịmalite ịtụle data ụlọ ọrụ dịka mgbanwe ọnụahịa na isi nkwụsị ahịa ndị ahịa na-esite na ọkwa ahịa na-apụ dị ka ohere iji wuo mkpọsa na-akpali akpali. Nzọụkwụ na-esote bụ ịtọ ntọala na nnwale nke aka-isi na-eme ka oghere kachasị mma, pịa na ntụgharị.
Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịkwalite data ndị ahịa iji wuo mkpọsa na-akpalite gburugburu ọtụtụ agbahapụ, gụnyere ọchụchọ, otu na ibe ngwaahịa. Nhapụ ọ bụla bụ ohere iji mụta site na omume ahụ ma kpalite ozi email dị oke mkpa, nke dị mkpa nke na-egosipụta ngwaahịa na onyinye metụtara onye ahịa ahụ. Usoro ọzọ dị irè bụ ịkpalite ozi email na ngwaahịa a kapịrị ọnụ, dịka ịdaba na ọnụahịa ma ọ bụ obere ngwaahịa.
Ndị na-ere ahịa nwekwara ike ịnwale na onyinye pụrụ iche iji hụ ihe na-akpali ROI kachasị elu. Iji maa atụ, mkpọsa na-echetara onye na-azụ ahịa ihe ndị ịzụ ahịa ịzụ ahịa nwere ike ime ka azụmahịa ahụ dị ụtọ site na ịnyefe mbufe n'efu Ndị na-ere ahịa nwere ike ịnwale ọnọdụ dị iche iche iji chọpụta nke kachasị mma iji kwado ahịa na ebumnuche ego.
N’oge gara aga, ịchọpụta ihe metụtara ya na ime ka mkpọsa a na-ebute na-ewe oge ma dịkwa oke ọnụ. Mana site na ecommerce dị elu na-ebute azịza dị ugbu a, ndị ahịa nwere ike ịmalite na ụbọchị, ọ bụghị ọnwa ma zipụ ndị na-akpalite na oge. Mgbe ị na-agba ọsọ na-akpali mkpọsa email ndị ahịa nwere ike, na kwesịrị, nyocha A / B na-ebute ahịrị isiokwu na imewe iji jide n'aka na a na-eziga ndị ahịa ziri ezi oge kwesịrị ekwesị.
Ndị ahịa na-eji nyocha A / B achọpụta ezigbo onyinye nwere ike ị nweta ụgwọ ọrụ bara uru. N'otu oge, otu akara hụrụ na-enye ihe ndị kasị mma ere ákwà ndị 300% na-arụ ọrụ nke ọma karịa onyinye ndị na-egosi “ndị bịara ọhụrụ.” Data dị ka nke a na-enyere ndị ahịa aka ịbawanye nloghachi na mkpọsa, yana ojiji nke usoro dịka itinye aha ngwaahịa ahụ na ahịrị isiokwu email, nke na-eme ka oge 10 dị irè.
Ndị na-ere ahịa taa nwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ n'ihi nnukwu data na ecommerce dị elu na-ebute ihe ngwọta. Ndị chọrọ inweta asọmpi kwesịrị ịtụle nke ọma gbasara mkpọsa mkpọsa kama ịtinye ha na atụmatụ email izugbe nke ụlọ ọrụ. Site na usoro nke dabere na iji data ndị ahịa na data katalọgụ rụọ ọrụ iji kpalite nkwukọrịta dị mkpa na nke oge, ndị na-ere ahịa nwere ike ịmalite ịmalite ịbawanye ụba.
Tags: ecommerce kpalitereecommerce kpalitere emailtiggeremail.iokpaliri ozi ịntanetị
Fayez Mohamood bụ cofounder na CEO nke Bluecore, na-enyere ndị na-ere ahịa eCommerce aka ịmepụta ma kesaa ozi ịntanetị nke ahaziri iche na ọsọ na nkenke ọ na-agaghị ekwe omume na mbụ, na-emeghachi omume na-emetụta omume ndị ahịa na mgbanwe ndekọ na sekọnd. Na ihe karịrị ndị mmekọ 70 na-anọchite anya ihe karịrị ụdị 100. Bluecore bụ otu n'ime mmalite mmalite na-eto ngwa ngwa na New York City, na nso nso a na-emechi usoro A nke ndu FirstMark Capital.
Onye ahia gi a ka o nyere gi aka
Mmetụta nke njem njem-Ngwaọrụ na Nhazi oge